जो छुटेर गए
२०७५ असोज २० शनिबार ०९:०७:००
अक्सर गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो मात्रै हो, मान्छे त यात्रामै छुट्छ । गर्भदेखि चिहानसम्मको यात्रामा कति मान्छे छुटे होलान् ! कति भेटिनेछन् । फेरि छुटिनेछन् । बेहिसाब जिन्दगीमा त्यसको कुनै हरहिसाब छैन ।
यतिबेला यात्राका बीचमा छुटेका यस्तै अनुहारको खोजीमा छन्– रमेश सायन ।
घनघस्याजस्तै उकालो चढ्दै आएका रमेशका लागि ‘छुटेका अनुहार’ सिमलको छहारी हो । शरदको कुमारी घाममा सियाँल ताप्दै उनी ‘छुटेका अनुहार’मा दृष्टि लगाइरहेका छन् । र, खोजिरहेका छन् आफ्नै विम्ब–प्रतिविम्ब ।
जादुयी शब्द शिल्पी रमेशको भर्जिन कलमले कति शब्द कोर्‍यो होला ? कति जिन्दगी चिहायो होला ? शायद त्यसैको फेहरिस्त पनि हो– ‘छुटेका अनुहार’ ।
विराटनगर । मोरङ अटो मोबाइल्स कम्पनीमा काम गर्थे । जिन्दगी (अ)निबन्ध थियो– अलयात्मक । अगद्यात्मक । अबान्कीपूर्ण । पूरै फुक्काफाल ।
तिनताक काठमाडौं राजधानी त छँदै थियो, त्योभन्दा बढ्ता थियो– सपनाको सहर । एकथान जिन्दगीमा अनेक थान सपना साँचेका । अझ भनौं— सपनाको बोझले थिचिएकाले त्राण पाउने थलो थियो– काठमाडौं । अभिभावकले थमाएका सपनाका पोका–पन्तुरा बोकेर हिँडेकाहरूको गन्तव्य पनि काठमाडौं नै हुन्थ्यो प्रायः ।
यसको ठीक उल्टो थिए रमेश । सपना भएको भए उनी विराटनगरतिरै बरालिइरहेका हुन्थे । आम मानिसले पाउने औसत वेतनभन्दा बढी नै थियो उनको । एक थान घर, एक थान परिवार । उही सासको ओहोरदोहोर । आफ्नै जहान–परिवारको स्याहारमात्रै जीवनको गन्तव्य हुन्थ्यो भने विराटनगर बाँच्न, जिन्दगीको रंगमञ्चमा नाच्न र सन्ततीका लागि ‘भविष्य’ साँच्न पर्याप्तै हुँदो हो ।
तर उनलाई लेख्नु थियो– आफ्नै डिको नमिलेको जिन्दगी ।
लेख्नु थियो उनलाई– अरूका हरफ नमिलेका जिन्दगी ।
लेख्नु थियो उनलाई– तमाम स्वरूप नमिलेको जिन्दगी ।
काठमाडौंको उडान भरे । ‘लेखेर बाँच्ने’ सपना बोकेर काठमाडौं आएका रमेश अरूको जिन्दगी देखेर वाक्क भए । राजधानी पसेकै दुई दिनमा उनको परिभाषा बदलियो– काठमाडौं त ‘दीर्घ रोगी’ पो रहेछ ।
धूलो–धूवाँ । अस्तव्यस्त । गञ्जागोल । भीडभाड । उकुसमुकुस । दम, छाती रोग, नाक, कान, घाँटीको संक्रमण काठमाडौं सहरका उपहार थिए । लेखनमा बहार आउला भनेको रुघा–खोकी पो सदाबहार बन्यो । त्यसबाट मुक्ति पाउन उनी कावासोती (नवलपरासी) हानिए ।
दशैंको मुखमा कावासोती पुगेका थिए । पर्यावरणमा अत्तर छर्किएझैं दशैं मगमगाइरहेको थियो । शरदको आँगनमा सयपत्री ढकमक्क फुलेका थिए । तिहारको प्रतीक्षामा रहेका मखमली मुस्कुराउने तरखरमै थिए ।
तर, उनको पिसाब अत्यन्त पोल्न थाल्यो । विराटनगरबाट काठमाडौं, काठमाडौंबाट कावासोती पुगेको बानीलाई दोष दिए उनले । दुई–चार दिन बाटो हेर्दा पनि निको नभएपछि पानीलाई पनि दोष दिए । निको हुनुको सट्टा रगत मिसिन थालेपछि उनी आत्तिए र चिकित्सकलाई देखाए ।
“यो गम्भीर रोग हुन सक्छ, यहाँ उपचार हुँदैन, तपाईं काठमाडौं गइहाल्नुस्,” चिकित्सकले तुरुन्तै काठमाडौं रेफर गरिदिए । अस्पतालबाट फर्कने बेला उनले पेनकिलर लिएका थिए । दुई–चार दिन त्यसले काम गरिहाल्यो । निको भयो दुख्न ।
त्यहीबीचमा काठमाडौं आएर अस्पताल पुग्छन् त चिकित्सकले अनुहार नमज्जासँग बिगारे । भने, “अवस्था निकै क्रिटिकल छ जस्तो छ । तुरुन्त भर्ना हुनू !”
हिँडेर गएका थिए । नर्सले ह्विलचेयरमा राखे । तल आकस्मिक कक्षमा पो पुर्‍याइयो– अशक्त बिरामीलाई झैं । शरीरका रौं उचालिन थाले । पक्षघात भएझैं भए हातगोडा । कुँजो भयो मुटु ।
तर, उपचारसँग झस्किएका होइनन् । रोगसँग अत्ताल्लिएका होइनन् । उमेरको छोरो अस्पतालको शय्यामा पुग्यो भनेर आमाबाबु चिन्तित हुनुहोला भनेर झसंग भएका पनि होइनन् । रोग लाग्यो भने उपचार हुन्छ, यो उनलाई थाहा छ । रोग लाग्यो भने मान्छे मर्छ– यो पनि उनलाई थाहा छ ।
उनी आत्तिनुको एउटै कारण हो– उपचार गर्ने पैसा छैन । अस्पतालमा मनग्गे बिल उठ्ला, भुक्तानी कसरी गर्ने ? रोगसँग होइन, पैसासँग डर थियो उनलाई ।
१०–१२ वर्ष भयो घर छाडेको । अभिभावक निश्चिन्त छन्– छोरो जागिरे छ । साथीसंगतिलाई पनि थाहा छ– यसले प्रशस्तै पैसा कमाउँछ । तर, आफूलाई मात्रै थाहा छ– रोग लागिसक्यो, उपचार गर्ने पैसा छैन ।
दाजु काठमाडौंमै थिए । सीधै भन्न सकेनन् । मोबाइलमा ‘टेक्स्ट’ गरे, “उपचार गर्न काठमाडौं आएको, डक्टरले मृगौलामा खराबी हुन सक्छ भन्यो । पैसा नलिइकन पो आएँ ।”
दाजु पैसा बोकेर दगुर्दै आए । भाइसँग पैसा छैन भनेर होइन, भाइले पैसा ल्याउन बिर्सिएछ भनेर । उपचार भयो । तत्क्षणको आवश्यकता टर्‍यो । त्यसपछि उनका चक्षु उघ्रिए– मैले बाँचेको शरीर हो भने रोग मैले कमाएको हुँ । मसँग बल, बुद्धि, विवेक छ भने आफ्नो रोगको उपचार गर्न आफैं सक्षम हुनुपर्छ । त्यस्तो लागेको ६–७ महिनापछि उनी कोरिया हानिए ।
कोरिया उड्दा उनी विल्कुल रित्ता थिए । जस्तो उनको गोजी थियो । देश छाड्नु पर्दाको पीडालाई विमानस्थलमै मिल्काएका थिए । र, खाली गरेका थिए मथिंगल । उनी कोरिया उडेको घर–परिवारलाई मात्रै थाहा भयो ।
देश छाड्नु एक साताअघि कार्यालयमा राजीनामापत्र बुझाएका थिए । राजीनामा बुझ्नेले सोधेका थिए, “किन राजीनामा दिँदै छौं ?”
उनले एक वाक्यमा उत्तर दिएका थिए, “कोरिया जान ।”
कोरिया प्रस्थान गर्नुअघि उनले सम्झौता गरेका थिए— म सागबारी (कृषि फार्म)मा काम गर्न जाँदै छु ।
मुटुमा देशको नाम होइन, मस्तिष्कमा केवल काम थियो । कामलाई ‘काम’जत्तिकै ‘वीर्यवान’ बनाउन विदेश हानिएका थिए उनी ।
कृषक परिवारमा जन्मिए । खेतबारीमा फलेका अनाज खाएर हुर्किए । तर, उनले अनौ समाउन पाएनन् । कोदालोकोदाली पनि समातेनन् । कुनै न कुनै ‘भाग्य’ले तगारो तेस्र्याइरह्यो ।
“पढेको मान्छेले हलो जोत्नु हुँदैन । खेतबारीमा काम गर्नु हुँदैन,” पढेवापत घर–परिवार–समाजको रूढ चिन्तनले अनौसँग विमुख गरायो उनलाई । तर, कोरिया गएकै दिन उनले १८ घण्टा माटोसँग मुकाबिला गर्ने र पसिना सिञ्चन गर्ने सौभाग्य पाए उनले ।
कोरियाले नै सिकायो उनलाई– काम ज्ञान हो । काम ध्यान हो । काम विज्ञान हो । र, काम अनुष्ठान हो ।
खाङवङ्दो । दक्षिण कोरियाको उत्तरी सीमावर्ती भूभाग । ग्राम्य इलाका । अगाडि बगान । बगानका दायाँबायाँ धनसार । दुइटा कोठा । झिँगटी, टायल लगाएका छाना । एउटा कृषकको घरमा काम गर्न पुगे उनी । पाँच महिनाका लागि वैतनिक कामदार थिए उनी ।
नाम्दङ फ्युद मालिक थिए उनका । असाध्यै मेहनती । कामलाई पूजा गर्ने प्रकृतिका । वयोवृद्ध (हजुरबा, हजुरआमा) पनि थिए त्यस घरमा ।
कोरिया पुगेको दुई–तीन दिन भएको थियो । तालिम अवधि पनि थियो त्यो । कोरियन भूमि । त्यहाँको स्वाद । हावाको नाद । जनजिब्रोसँग चिनापर्ची गर्नुपर्ने । नेपाली जिब्रो कोरियन स्वादमा अभ्यस्त हुन समय लागिहाल्यो । तालिम–अवधिमा चम्चाले खाना खाएका थिए उनले । तर, नाम्दङकहाँ पुगेकै दिन चपस्टिकले खानुपर्ने भयो । तिनताक काठमाडौंमै पनि कोरियन, चाइनिज रेस्टुँरा खुलिसकेका थिए । त्यहाँ गएर पनि चपस्टिक उचालेका थिएनन् । कोरिया पुगेर चपस्टिक उचाल्ने भाग्य पनि आफ्नै निधारमा छ भनेर कसरी थाहा पाउनू !
‘मे’को पुछार, उखरमाउलो गर्मी । नाम्दङले रेस्टुँरामा पुर्‍याए, जहाँ बरफ राखिएको चाउचाउ उनको प्रतीक्षामा थियो । चाउचाउमाथि चपस्टिक तेर्सिएको थियो । चपस्टिकमा आँखा पुग्नेबित्तिकै भोकले भन्दा गलायो उनलाई— जीवनमै चपस्टिक छोएको छैन, कसरी चाउचाउ च्याप्नू ?
अघिसम्म पेटमा सल्बलाइरहेको भोकको रसायन क्षणभरमै दूर भयो । निधारमा पसिनाका बुँद देखा पर्न थाले । एकदमै चिल्लो । लामो । काँटा–चम्माले केहीसीप नचल्ने, चपस्टिकको सहायताले खानुपर्ने । दुई–चारपटक प्रयास त गरे तर मुखमै नपुग्ने । हैरान भए उनी ।
पर बसेर हेरिरहेका कोरियनहरू मुखामुख गर्थे । उनीहरूले भन्ठान्दा रहेछन्– विदेशीले कोरियन नुडल्स मन पराएन !
उनले चपस्टिकले खान नजानेको नाम्दङलेसमेत बुझेनन् । उनी नाम्दङलाई चम्चा–काँटा ल्याइदेऊ भन्न चाहन्छन् तर भन्न सक्दैनन् । भाषा नजान्नुको सकस बल्ल ठम्याए उनले । रमेशको दुःख त्यहीँका कोरियनले पहिचान गरेछन् । उनले गुगल ट्रान्सलेसनको सहायताले सोधे, “कुन देशबाट आएको ?”
उनले भने, “नेपाल ।”
उनले तत्कालै सर्च गरे– नेपालका मानिसले केले खाना खान्छन् ?
मोबाइलको पर्दामा देखिइहाल्यो– नेपालीले हातैले खान्छन् । त्यस्तै पर्दा चम्चाकाँटाको प्रयोग गर्छन् । चपस्टिक उनीहरूको संस्कार होइन ।
त्यो थाहा पाएपछि उसले भन्यो, “हातैले खाऊ !”
त्यत्रा मानिसका अघिल्तिर हातले चाउचाउ कसरी खानू ! अक्मकाए रमेश । उसैले पसलेलाई काँटा ल्याउन अह्रायो । चपस्टिकको दुःखबाट पार पाए उनले ।
“नेपालमा छँदा तीन–चार मिनेटभित्रै खाना खाइसक्थें । त्यस दिन चाउचाउ खान झन्डै २५ मिनेट लाग्यो,” चपस्टिकको दुःख उधिन्छन् उनी ।
केरियन खानाबाट आस्वादित हुन सकेनन् उनी । कोरियन खाना देख्नबित्तिकै दिगमिगाउँछन् उनी, अहिले पनि ।
नुनको सट्टामा चिनी र अजिनोमोटो प्रयोग गरिएको खाना देख्नेबित्तिकै लागेको भोक पनि फिर्ता हुन्छ । तर, त्यस दिनको स्वाद ओठमा झुन्डिने थियो ।
तालिम केन्द्रमा चाउचाउलगायतका खानेकुरा मात्रै खान पाउँदा पेट अघाएको थिएन । खाङवङ्दो पुगेकै दिन झोल हालेको खानेकुरा देख्दा आँतै रसायो । भातको छेउमा ग्रेभी मासु थियो ।
“खे खोगी मगयो ?” नाम्दङले भने ।
उनले शुरूको अक्षर बुझेनन् बीच र अन्तिमको मात्रै बुझे– ‘खोगी’ भनेको ‘मासु’ । ‘मगयो’ भनेको ‘खान्छौ’ ?
उनले दुवै वाक्यलाई जोडेर अथ्र्याए । भाषा पूरै नजान्ने । ‘खाने’ भन्ने जनाउ दिँदै मुन्टो हल्लाए । एकदमै मीठो । सुस्वादु । कोरियामा यघिविघ्न मिष्ठान्न परिकारको कल्पना गरेका थिएनन् उनले । थपीथपी खाए ।
नाम्दङकी श्रीमतीले सोधिन्, “मीठो छ ?”
उनले फेरि टाउको हल्लाएर भने, “मीठो छ ।”
नाम्दङको श्रीमती हर्षविभोर भइन् । बा—आमा खुसी भए ।
“विदेशीले कोरियन खाना मन परायो,” घरै हाँस्यो ।
त्यस्तै २०–२५ दिन भएको हुँदो हो । नाम्दङले साथीभाइको जमघट गरेका रहेछन् । उनले रमेशलाई भने, “आज राम्रोसँग काम गर । आज कुकुरको मासु खानुपर्छ ।”
“कुकुरको मासु खाने ?” उनी एकैपटक आत्तिए । भुइँचालो गएभन्दा बढ्ता भयो ।
अत्ताल्लिँदै भने, “नाइँ..नाइँ.. खान्नँ !”
रमेशको अनुहारको भावभंगिमा देखेर नाम्दङको श्रीमती खित्का छाड्न थालिन् । उनले भनिन्, “तिमी कसरी कुकुरको मासु खाँदैनौं ? तिमीले आएकै दिन कुकुरको मासु खाएको ! त्यसपछि पनि पाँच–छ पटक कुकुरको मासु खाइसक्यौ !”
त्यसपछि पो थाहा पाए । शुरूकै दिनको ओठमा झुन्डिएको स्वाद कुकुरको मासुको पो रहेछ !
तब न अल्पज्ञान भयंकरम् ! शुरूको अक्षर नबुझ्दा कुकुरको मासु पेटमा पुगेको थियो उनले ।
कोरियन सहृदयी हुन्छन् । सहयोग, सद्भाव र सम्मान उनका अचल सम्पत्ति हुन् । भनौं न अक्षय कोषजत्तिकै । लाग्छ– त्यही ब्याजले उनीहरू उन्नति र प्रगतिको पथमा अविराम लम्किइरहेका छन् ।
कोरियाबाट फर्कनुभन्दा तीन महिनाअघिको मात्रै कुरा हो । एकजना सहयोगी भेटिए । बैंकमा । सहयोगी निकै वृद्ध थिए । अनुहारका धर्सा समेत बूढा भइसकेका । कपाल काँसझैं फुलेका थिए । भाषामा निकै पोख्त र पारंगत भइसकेका थिए रमेश ।
उनले सोधे, “कहाँबाट आयौ ?”
रमेशले उत्तर फर्काए, “नेपाल !”
नेपालको नाम सुन्नेबित्तिकै उनका आँखा विस्फारित भए । भने, “अब कहाँ जान्छौ ?”
संयोग नै मान्नुपर्छ । ती वृद्ध र रमेशको बाटो एउटै पर्दो रहेछ । उनले भन्न थाले, “म पुर्‍याइदिन्छु तिमीलाई, हिँड ।”
आधा बाटोमै पर्दो रहेछ वृद्धको घर तर उनलाई किन दुःख दिनु ? रमेशले टाउको हल्लाउँदै भने, “भै गो पर्दैन, म ट्याक्सीमा जान्छु !”
तर, वृद्ध मान्न तयार भएनन्, “तिमी पैसा कमाउन यत्रो टाढाको देश आएका छौ । किन ट्याक्सीमा गएर पैसा खर्च गर्छौ ? प्रेमिका, श्रीमती, बाबु–आमा छाडेर आएका होलाउ, बरु त्यो पैसा उनीहरूलाई पठाऊ, खुशी हुन्छन् ।” अनुहार बिगारे वृद्धले ।
उनको गाडीमा नगई धरै पाएनन्, वृद्धले ।
बाटामा ती वृद्धले आफ्ना कथा सुनाए । १९६० को दशकमा उनी पनि साउदीमा श्रम बेच्न गएका रहेछन्, जतिबेला कोरिया गरिबीको पर्याय थियो, निर्धनको प्रतिविम्ब थियो, अभावले ग्रस्त थियो ।
उनले रमेशलाई सुझाए, “म पनि चिसो देश छाडेर मरुतुल्य, उष्ण साउदी भूमिमा काम गर्न गएको थिएँ । तीन वर्षपछि पैसा कमाएर फर्किएँ । तिमीहरूको देश पनि एकदिन कोरियाजस्तै हुन्छ । पैसा कमाएपछि यहाँ बस्नु हुँदैन । आफ्नै देश फर्कनुपर्छ ।”
तर, उनी नेपाल फर्किएको वृद्धको सुझावले मात्रै होइन ।
सन् २०१६ को मेतिरै हुनुपर्छ । धूपले खारिएको थियो कोरिया भूमि । गर्मीले असिन–पसिन तुल्याएपछि शीतल, सियाँल खोज्दै उनी गाउँ पसेका थिए, खाल्चनतिर । एकजना वयोवृद्धा भेटिइन्, चौतारामा । ८० वर्ष उमेर हाराहारीकी ती वृद्ध निकै विक्षिप्त थिइन् । सन्तानको माया र सुखबाट ओझेल परिसकेकी ती वृद्ध क्षितिजमा घाम हेर्दै टोलाउँदै थिइन् । शायद काल पर्खिइरहेकी होलिन् । सन्तानबाट विमुख ती आमा घामसँग पनि प्रार्थना गरिरहेकी हुँदी हुन्, “ओई मृत्यु, छिट्टै मलाई लिन आइजो !”
रमेश देख्नेबित्तिकै उनको अनुहारमा पुलुक्क घाम झुल्कियो । सोधिन्, “कहाँबाट आयौ ?”
३२ वर्षका रमेश । कोरियन धूपले श्यामल थियो अनुहार । ती वयोवृद्धाले रमेशको अनुहारमा आफ्नै कान्छो छोराको प्रतिच्छाया देखिछन् । भन्न थालिन्, “मेरो कान्छो छोरा पनि तिम्रै उमेरको छ । शहरतिरै बस्छ । अरूअरू छोराहरू बेलाबेला भेट्न आउँछन् । ऊचाहिँ आउन पाउँदैन । तीन वर्ष भयो, उसको अनुहार देखेकी छैन ।”
रमेशको अनुहार हेरेर छोराको नियास्रो मेटिन् वृद्धाले । रमेशलाई वृद्धाको भन्दा पनि आफ्नै आमाको चिन्ता भयो । ती वृद्धाको अनुहारमा आमाको प्रतिच्छाया देख्न थाले रमेशले पनि ।
वृद्ध सुनाउँदै थिइन् पीडा, “पोहोरसम्म काम गर्थें, यसपालिदेखि काम गर्न सक्न पनि छाडें । सरकारी घरमा बस्छु । खाना त्यहीँ खान्छु । दिनभरि यहीँ बस्छु, राति सुत्नमात्रै जान्छु त्यहाँ ।”
रमेशको घर पनि हटिया नजिकै पर्छ । घर नजिकै धारो छ । उनले सोच्न थाले— मेरै उमेरका मान्छेहरू त्यो धारामा पानी खान जाँदा हुन् । मेरी आमा तिनै अनुहारमा मलाई खोज्नुहुँदो हो र भन्नुहुँदो हो, “मेरो छोरो पनि परदेश बस्छ । घर आउन पाउँदैन । तीन वर्ष भो उसको अनुहार मेरो आँखाबाट छुटेको !”
त्यसपछि उनी कोरियन वैभव छाडेर सदाका लागि देश फर्किए । कोरियाको अनुहार उनको आँखाबाट छुटिगो ।
लेखनसँग उनको स्वभाव जोडिएको छ । उनी जस्ता छन्, उनका शब्द त्यस्तै छन्– पानीजस्तै कलकल । हरपल । सरस । सलिल ।
साथीसँग रिस उठ्ने तर हानाहान गर्न नसक्ने । चित्त नबुझ्ने तर बाझ्न नसक्ने । बोल्न खोज्ने तर अभिव्यक्त गर्न नसक्ने । त्यसको जवाफ लेख्थे । कापीमा पोख्थे । त्यसको स्पष्ट चित्र छैन । घुर्मैलो याद आउँछ । धुमिल सम्झनामात्रै बाँकी छन् ।
त्यस्तै ७–८ कक्षा पढ्दाताकाको कुरा हो । कक्षा छाडेर चलचित्र हेर्न गए, साथीको लहैलहैमा । सर्लाहीको हजरियाबाट बरथवा पुग्नुपर्ने । हरिभक्त कटुवालले कवितामा भनेजस्तै हात्तीछाप चप्पल बीचमै च्वाट्ट चुँडियो । चार–पाँच किलोमिटर दूरी, चप्पलले धोका दियो भनेको, साथी त झन् मापाका निस्के । उनलाई छाडेर बाटो लागिहाले ।
एक हातमा चप्पल च्यापेर हस्याङ्फस्याङ् गर्दै फिल्म हल पुगेको, समयले पनि धोका दियो । फिल्म लागेको पाँच मिनेट पछि पुगे उनी । फिल्म छुटाइदिने चप्पल । ढिलो हिँड्न नजान्ने समय । नपर्खने साथी । तिनैविरुद्ध विद्रोह ओकल्न मन लागेको थियो । तर, उनले मुख फोर्न सकेनन् ।
र, लेखे, “फिल्म हेर्न जाँदा चप्पल चुँडियो । लीलामणिले छाड्यो । सेवकले छाड्यो । सबैले छाडे । म धर्धरी रोएँ ।”
“झगडा पनि गर्न नसक्ने, साथीहरूका अघिल्तिर रुन पनि नसक्ने, चिच्याउन पनि नसक्ने । केही पनि गर्न नसक्नुको पीडा भयानक हुन्छ । त्यसैको अभिव्यक्ति हो लेखन,” लेख्न थाल्दाको क्षण सम्झन्छन् उनी ।
विद्रोह अभिव्यक्तिको स्वच्छन्द माध्यम बन्यो उनको– लेखन ।
उनको साहित्यको सूत्रपात काव्यबाटै भएको हो । तर, कवितामा जे भन्न सकेनन्, त्यही कुरा निबन्धमा भन्न थालेका छन् उनले । तथापि यी दुवै उनका प्रिय विधा हुन् ।
कैशोर्यकालमा बाल्यअसन्तुष्टि पोख्ने माध्यम थियो लेखन । यौवनवयसँगै समाजको चेतना जोडिएर आयो । ज्ञानको क्षितिजसँगै लेखनको आयाम पनि बदलियो । देश दुनियाँ देखेका रमेश तिनै अनुभूति लेखोटमा पस्कन्छन्् । र, पाठकलाई आह्लादित तुल्याउँछन् ।
उनले जुन भाषा, शैलीमा निबन्ध लेख्छन्, पाठकले आफ्नै छाया भेट्छन् । र त, युवा पुस्तामाझ परिचित पनि छन् । त्यही चर्चालाई पुँजीकृत गर्दै ‘छुटेका अनुहार’ बोकेर आएका छन् उनी ।
उनी जुन बाटो हिँड्दै आए, त्यही बाटोको डोब हो, ‘छुटेका अनुहार’ । जुन समाजमा हुर्किए त्यही समाजको प्रतिच्छाया हो, ‘छुटेका अनुहार’ । जुन माटोमा खाइखेली गरे, त्यही माटोको सुगन्ध हो, ‘छुटेका अनुहार’ ।
र, त्योभन्दा बढी ‘छुटेका अनुहार’ समाजको ऐना हो, जसले तपाईं–हाम्रा आँखाबाट छुटेका अनुहार छर्लंगै देखाइदिन्छ ।
(शायनको ‘छुटेका अनुहार’ शनिबार (आज) दिउँसो २ः३० बजे मण्डला थिएटर, अनामनगरमा अनावरण हुँदैछ ।)